Win32 / Zum को बारे मा चिन्ता गर्न रोक्नुहोस्! ट्रोजन! Semalt एक एंटी भाईरस गाइड अनावरण गर्दछ
Win32 / Zum! ट्रोजन, नामले देखाउँदछ, एक ट्रोजन मालवेयर हो जसले विन्डोज पीसीहरूमा गोप्य घुसपैठ गर्दछ। तपाईले यसको बारेमा सचेत हुनुहुने छैन जबसम्म यो खराब गतिविधि शुरू गर्दैन। सर्वप्रथम, यसले पहिचान रोक्न एंटीवायरसलाई असक्षम गर्दछ। त्यसोभए यसले रेजिस्ट्रीमा आफूलाई समाहित गर्दछ जहाँ यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई भ्रमित गर्न यसको स्थान परिवर्तन गर्न जारी राख्छ। सबैभन्दा खराब अझै, Win32 / Zum! ट्रोजन आफैंको प्रतिलिपि बनाउँछ र तिनीहरूलाई अन्य फाइल प्रणालीमा फैलाउँछ। र यदि तपाइँ अधिक समय अनलाइनमा खर्च गर्नुहुन्छ भने, त्यसपछि मालवेयरले टाढाको सर्भरबाट स्पाइवेयर र भाइरसहरू डाउनलोड गर्दछ। यो एक दुःस्वप्न मात्र हो यसले हुने क्षतिको सोच्दै।
सेमाल्टका अग्रणी विशेषज्ञ, जुलिया वाष्नेभाले कसरी भाइरसबाट प्रभावकारी ढ rid्गबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ भन्नेबारे उपयोगी मार्गनिर्देशन तयार पारेका छन।
तपाईं कसरी संक्रमित हुन्छन्?
तपाइँ Win32 / Zum / Trojan को माध्यम बाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ:
फाईलहरू p2p नेटवर्क, टोरेन्टमा साझेदारी गरियो
संक्रमित फ्ल्यास ड्राइभहरू
शंकास्पद पप-अप, लि links्कहरू, र केहि विज्ञापनहरूमा क्लिक गर्दै
एक पटक ट्रोजनले तपाईंको पीसीमा संक्रमित गरिसकेपछि, मेशिन ढिलाइ हुन थाल्छ, केहि प्रोग्रामहरू त्रुटि दिंदा कार्यान्वयन गर्न असफल हुन्छ, वेब ब्राउजरले क्र्यास गरिरहन्छ र तपाईंको निजी डाटा चोरी गर्न सकिन्छ भने तपाईंलाई तपाईंको पैसाको ठग्ने काम गर्न प्रयोग गर्नुहोस्। विन्दु मा, क्रेडिट कार्ड जानकारी तपाईं सुक्खा दूध गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसो भए कसरी तपाईं Win32 / Zum! Trojan लाई हटाउनुहुन्छ? पत्ता लगाउन को लागी पढ्नुहोस्।
त्यहाँ Win32 / Zum! ट्रोजन मालवेयर हटाउने दुई प्रयास गरिएका र परिक्षण गरिएका तरिकाहरू छन्। तपाईं कि त मैन्युअल वा सफ्टवेयर-आधारित तरिकामा जान रोज्न सक्नुहुन्छ। पछि शून्य पुनरावृत्ति दरको साथ खतराबाट मुक्त हुन्छ। वास्तवमा भन्ने हो, विज्ञहरूले सिफारिश गर्छन् तपाईलाई म्यानुअल तरिकाले हटाउने समयलाई ध्यानमा राखेर।
म्यानुअल तरिकाले जाँदै
चरण १: नेटवर्कि withका साथ तपाईको पीसी आईएनए सुरक्षित मोड सुरू गर्नुहोस् वा बुट गर्नुहोस्
सुरु मेनूमा जानुहोस्
पुन: सुरु क्लिक गर्नुहोस्
जब सिस्टम बुट भइरहेको छ "F8" कुञ्जी (बटन) थिच्नुहोस्
एक उन्नत बुट मेनू देखा पर्छ
"नेटवर्कि withको साथ सुरक्षित मोड" चयन गर्नुहोस् त्यसपछि इन्टर बटन थिच्नुहोस्
चरण २: टास्क प्रबन्धकको प्रयोग गरेर मालवेयर मार्नुहोस्
एकै साथ 'Alt', 'Ctrl' र 'Del' बटन थिच्नुहोस्
कार्य प्रबन्धक विन्डो पर्दामा पप अप
प्रक्रिया ट्याबमा, प्रक्रिया पत्ता लगाउनुहोस् र मार्नुहोस्। केवल यसमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र 'कार्य समाप्त गर्नुहोस्' चयन गर्नुहोस्।
चरण:: तपाइँको नियन्त्रण प्यानेलबाट Win32 / Zum! Trojan हटाउनुहोस्
चरण:: Win32 / Zum हटाउनुहोस्! मोज़िला, क्रोम, इन्टर्नेट एक्स्प्लोरर, ओपेरा वा जुन तपाईं प्रयोग गर्ने ब्राउजरमा ट्रोजन ब्राउजर विस्तारहरू।
चरण:: सबै Win32 / Zum हटाउनुहोस् रेजिस्ट्रीबाट ट्रोजन फाईलहरू
विन्डोज (W) र R बटन एकै साथ थिच्नुहोस्
रन बक्स देखा पर्दछ। टाइप गर्नुहोस् 'regedit' तब ठीक
सबै मालिसियस फाईलहरू फेला पार्नुहोस् र मेटाउनुहोस्
खतरा दूर भयो। मानसिक शान्तिको आनन्द लिनुहोस्।
Win32 / Zum हटाउँदै! सफ्टवेयर प्रयोग गरी ट्रोजन
एक शक्तिशाली एन्टी मालवेयर सफ्टवेयरको प्रयोग गर्नु Win32 / Zum! Trojan बाट छुटकारा पाउने सब भन्दा सजिलो र प्रभावकारी तरीका हो। सफ्टवेयरले keylogger र रुटकिट सहित सबै फाईलहरूको द्रुत र व्यापक स्क्यान गर्छ। यसले अन्य खतराहरूबाट वास्तविक समय सुरक्षा प्रदान गर्दा मालवेयर हटाउँछ। स्पायहुन्टर एक उत्कृष्ट एंटी-मालवेयर प्रोग्राम हो, र यसले सबै विन्डोज संस्करणहरूमा काम गर्दछ। यसलाई प्रयास गर्नुहोस् र ट्रोजन आक्रमणको सपनाबाट तपाईलाई बचाउनुहोस्।